Farmaajo oo sheegay in dhawaan uu magacaabi doono guddi ka shaqeeya dabagalka fulinta mashaariicda horumarineed ee uu ka dhagax dhigay deegaannadii uu socdaalka kusoo maray - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaFarmaajo oo sheegay in dhawaan uu magacaabi doono guddi ka shaqeeya dabagalka fulinta mashaariicda horumarineed ee uu ka dhagax dhigay deegaannadii uu socdaalka kusoo maray
January 24, 2018 Puntland Mirror Somalia 0
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo warbaahinta kula hadlayay Villa Soomaaliya. [Sawirka]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in dhawaan uu magacaabi doono guddi ka shaqeeya dabagalka fulinta mashaariicda horumarineed ee uu ka dhagax dhigay deegaannadii uu socdaalka kusoo maray dhawaan.
Madaxweynaha oo Saxaafadda kula hadlay xafiiskiisa ayaa ka warbixiyey socdaalkii uu u bixiyay “Nabadda iyo dib u Heshiisiinta”, isagoona sheegay in si dhow uu ula soconayo dhammeystirka fulinta mashaariicda uu dhagax dhigay.
“Maalmaha soo socda waxaan magacaabayaa guddi dabagal ku sameeya mashaariicdii aan soo ballan qaadey, si aan ula soconno dhaqan galkooda. Dowladda waxaa ka go’an in ay kaalinteeda ka qaadato.” Ayuu yiri Farmaajo.
Sidoo kale, Madaxweynaha ayaa ku bogaadiyey Madaxda Dowlad Goboleedyada Puntland iyo Galmudug dadaalka ay ugu jiraan horumarinta, xasilinta, nabadeynta iyo dib u heshiisiinta bulshada ku dhaqan deegannadaas.
Madaxweyne Farmaajo ayaa shalay oo Talaado aheyd dib ugu noqday Muqdisho kadib socdaal qaatay muddo 17 maalmood ah oo uu ku maray gobolo kuyaala Puntland iyo Galmudug.
March 14, 2018 Ku dhawaad 90 xildhibaan oo katirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo gudbisay mooshin ka dhan ah Jawaari
February 11, 2018 Muxuu yahay heshiiska ay gaareen dowladda federaalka iyo maamuul goboleedyada ee ku saabsan qeybsiga dakhliga kasoo xarooda kalluumeysiga?
August 12, 2018 Farmaajo: Dhallinyarada Soomaaliyeed waxa ay udub dhexaad u yihiin horumarka iyo dib-u-curashada dawladnimada dalka
Puntland forces raid Al-Shabab hideouts in Galgala Mountains
Garowe-(Puntland Mirror) Puntland forces raided Al-Shabab hideouts in Galgala Mountains Friday afternoon, security sources said. A Puntland security officer who requested anonymity told Puntland Mirror that the army has carried out operations against the militants [...]
Garoowe-(Puntland Mirror) Dowladda Puntland ayaa sheegtay in ciidamadeedu aysan wali dib u qabsan magaalo xeebeedka Qandala ee gobolka Bari, sida uu sheegay sargaal. Isaga oo la hadlayay idaacada laanta Af-Soomaaliga ee VOA, taliyaha ciidamada badda [...]